1.3 בלוגים פרילנסרים
2 קונגאני אימיקיצ’יזו ישימו אסישה אסישיסאיו
2.3 אני מספר 3: אימפיליה Imikhiqizo Iyaphathwa Futhi
2.4 # 4: Imali engenayo אתם-פסיביים
3.1 I-Product Idea # 1: ספרים אלקטרוניים / Amabhuku
3.2 I-Product idea # 2: I-Webinars / Izifundo ze-Inthanethi
3.3 רעיון I-Product מספר 3: אימון / ייעוץ
3.5 Umkhiqizo we-idea # 5: אימידוובו אהלנגאניסיווה & איזינטו זוקוואחווה קוווובו
Okuthunyelwe okuxhasiwe kukuhle ukufunda ukuthi ungasebenza kanjani futhi ubonise umkhiqizo, קודווה amakhasimende abhekeke angafuni ukubona okuningi kulawa kubhulogi yakho (i-20% exhasiwe ku-80% engaxhasiwe ibhekwa "kuhle"), futhi ayifuni ukubona izethulo zokuncintisana. Okuthunyelwe okuxhasiwe kungase kungabuyiseli ukubuyisa okukhulu ngesikhathi sakho sokutshalwa kwezimali. Uma iklayenti ikukhokhela i- $ 100, and uchitha amahora amahlanu usebenza kulowo msebenzi, kusukela ekuthengeni komkhiqizo kuya kokuthunyelwe okuhlelekile, uenzela u- 20 $ ngehora. Umzamo kungenzeka ukuthi awufanele ukukhokha.
Lokhu kubonakala sengathi kungenayo imali elula, kepha imithetho ingashintsha izinjini, imithombo yezokuxhumana / ividiyo, izidingo ze-FTC, ukumaketha kwe-imeyili kanye nenhlangano yakho yokubambisana kungaba inselele. Udinga ukuhambisana nalabo futhi ugcine engqondweni uma izixhumanisi zakho ziphela. פוטי ח’ומבולה, אוקותי izivakashi nemikhiqizo babheka lokhu njengenkxaso. Ngokuvamile ithatha izilaleli ezinkulu (ukubukwa kwekhasi le-100,000) ukwenza okungaphezu kwama-dollar ambalwa ngokuthunyelwe.
Ngincoma ukuthi wenze lokhu, uma ufuna ukuba umbhali. Noma kunjalo, le miklamo ingaba isikhathi esiningi futhi ingakunqanda. נגומונטו סיק, אנגיבאלה נגפאזהו קווה -8 ייליזי זינאנגה נגובה קונימה קכולו אוקיוכיזיזה אוקוקווטהווה kwekhwalithi uma nginezinhlelo eziningi זוקובהלה.
קונגאני אימיקיצ’יזו ישימו אסישה אסישיסאיו
Nakuba akudingeki ulahle amaphrojekthi afana nalawa, ukuthengisa imikhiqizo yakho kuzonikeza umthombo ongcono wemali engenayo. איזינזוזו הנאצי:
Uma usungile umkhiqizo, ungayithengisa kuze kube phakade uma kunesiqephu esivamile. אינקאמבו יוקובלוגה נומה אימידיאה יודנהללו איזושינצה נוגוקוהמבה kwesikhathi, noma kunjalo, izincwadi zokubeletha noma zokupheka zingadla isikhathi eside ngezibuyekezo ezincane noma ezingekho.
Umkhiqizo wakho ungaba isikhathi eside noma esifushane njengoba udinga, ungaba nemininingwane מגבירים את קכולו, ingahle ibuyekezwe njengoba ubona kufanelekile, noma ungadala izinguqulo ezintsha ngokusekelwe ekubukeni kwezilaleli. פוטי קויי נגוקותי ואמביסה קנג’אני umkhiqizo wakho, uzoba nokulawula amanani futhi ugcine iningi noma yonke inzuzo.
אני מספר 3: אימפיליה Imikhiqizo Iyaphathwa Futhi
# 4: Imali engenayo אתם-פסיביים
וונק אומונטו ufuna ukuthola imali ngenkathi elele. Ngenkathi izikhangiso zingakusiza ukwenza lokho, imikhiqizo inenzuzo kakhulu, ingapheli futhi ukuthengisa kungenziwa ngokuzenzekelayo, kukunikeza indlela elula yokuthengisa.
Ubuchwepheshe bakho bungakuseta kahle kakhulu ukuze uthengise izinhlobo ezithile zezinto. Uzodinga ukugxila endaweni lapho unesipiliyoni khona futhi wakhe umkhiqizo ozungeze amakhono akho נישה: ukuba ngumzali, ukupheka, ukwenza isikole, njll.
I-Product Idea # 1: ספרים אלקטרוניים / Amabhuku
Ama-Ebooks amahle ngoba ashesha futhi alula, futhi angaholela ezintweni ezifana nomsebenzi wokukhuluma noma okunikezwayo okungenzeka ukushicilelwa. Kodwa-ke, uhlala wedwa kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni, ngakho-ke qiniseka ukuthi uqasha usizo lokuklama, ukuhlela nokwenza ubufakazi. אוזודינגה פות’י ואומר שזה איסינקומו סוקוטי ואוזובנזה ייני נומה צ’ה אוקוזישיקיללה. Ungadinga ukugcina iphuzu lentengo liphansi. Ukwengeza, ungase ufune ifomethi engadluli kalula kwabanye, njenge-PDF. Ungasebenzisa okuqukethwe kwebhuku njengomlingo wokuhola wamahhala wokuheha ababhalisile.
I-Product idea # 2: I-Webinars / Izifundo ze-Inthanethi
Izifundo nama-webinars akuvumela ukuthi ukhokhe imali eningi. Indlela elula yokusetha eyodwa ukunikeza uhlelo lokuqeqesha i-Imeyili, ukuhambisa amamojuli amasonto onke. אומה unokuqukethwe okwanele kubhulogi yakho, ungakwazi ukuthatha inqwaba yezinto ezivela kuso. Ama-webinars אפיל בוכולו קודווה קונזימה קכולו פוחי איציקאת’י אסינדינגי קודווה אונגקוואזי נייקאזה אוקאקהשווה קוואמהלהלה ukudayisa inkambo yakho egcwele. Khumbula ukuthi uzodinga ukusekela abafundi bakho uma benemibuzo noma izinkinga.
רעיון I-Product מספר 3: אימון / ייעוץ
Lokhu kuyithuluzi elihle לומונטו onamakhono akhethekile, aqeqeshiwe (isibonelo, ukupheka kwe-gluten mahhala noma ukucindezeleka okukhululekile kokubeletha) nokuqeqeshwa okuningi koqeqeshi okutholakala ukuthi ungenele. Kudingeka ube ngabantu bemi, futhi, futhi uhlele izikhathi ezizwakalayo zokutholakala kwakho nokuthi yini oyikhokhayo. Yazi indaba yakho ngokujulile futhi ulindele ukuba nabaqaleleli abaphelele abazobhekana nokucabanga okuyisisekelo.
Umkhiqizo we-idea # 5: אימידוובו אהלנגאניסיווה & איזינטו זוקוואחווה קוווובו
Ababhulogi abaningi bafunda banothando lokuchofoza ikhodi noma ukuklama ihluzo. ערכות נושא של WordPress neganikeza amaphakheji afana ne, Isethi yezithonjana noma ukugcinwa kwebhulogi. אומה מנוסה במיומנות, אלקבנגלה amasayithi wokwakha kusukela ekuqaleni noma umklamo we-logo. Lezi zinketho zidinga izinga eliphakeme lamakhono, ngakho-ke uqeqesha okuningi ngangokunokwenzeka futhi usebenzise isofthiwe yezobuchwepheshe uma ungakwazi ukuyikhokhela.
לנה enye indawo ababhalisi abaningi abangena kuyo ngenzuzo. Ngingeke ngihambe ngale ndlela ngaphandle kokuba okungenani unekhamera ye-DSLR enezilonda ezithengiwe ngokwehlukana, futhi wazi ngempela izisekelo eziyisisekelo zokudlala iithithbe, njengokungathi ukukhanyaes komith nokubusa. Ungathumela izithombe zakho bese uyithengisa ngezinye zezindlu ezinkulu zesitoko.
אומה usukhethile umkhiqizo omuhle we-niche יאקו קאנה nesethi yakho yamakhono, uzodinga ukuthola ukuthi uzothengisa kanjani umkhiqizo wakho.
Uma ungazi ukuthi ungaqala kuphi, yenza ucwaningo. Thola osomabhizinisi abathengisa imikhiqizo efanayo futhi babone ukuthi bayakhokhisa. Khumbula ukuthi ngokuqeqesha kanye nezinsizakalo, isipiliyoni sizodlala indima ekunqumeni amanani akho יהורה. Noma kunjalo, unganikeli amasevisi wakho mahhala ukwakha isipiliyoni. Lokhu kusetha ukulindela, kokubili kusuka kuklayenti lakho nangaphakathi kwakho, ukuthi noma yini ongayikhokhisa iphakeme kakhulu. Labo abakhokhisa ngaphezulu babhekwa njengabachwepheshe abaningi kunalabo abanikeza izindleko eziphansi noma amasevisi. Ungakwazi ukubonisana mahhala, noma kunjalo, ukubona ukuthi ulungile yini kumthengi wakho ozokwenza.
Ukusebenzisana kuyindlela להעצים את yokwenza izwi lilalele izilaleli ezinkulu futhi linikeze izinketho eziningi. Amanye imibono yobudlelwane ibandakanya umklami wewebhu osebenza nomdwebi odwebayo, i-blogger yomsebenzi osebenza nomphathi wezokuxhumana, noma umqeqeshi wempilo esebenza nomuntu othengisa izithako zezempilo. Ungase futhi uthenge umkhiqizo wakho ngokusebenzisa amabhulogi amakhulu amakhulu ngokusetha uhlelo lokubambisana olunikeza iphesenti yokuthengisa njengesikhuthazo.
Izindlela ezifanayo zokuthengisa zisebenza njengokubhalisa: thola imakethe yakho ehlosiwe, yakha umlenze oholayo kanye nekhasi lokufika futhi wakhe uhlu lwakho lwe-imeyili. איבהולוגי יאקו הואשיהו איתולוזי לוקומקטהה קודווה גצ’ינה איצווי לאקו פוטי ניביי ניבוח אפנאיו, ננגקאתי ususa umkhiqizo wakho kokuqukethwe kwakho.